I-Huawei Mate 20 Pro, ukubonakala kokuqala kwesi sigxina sikhulu | I-Androidsis
UMiguel Hernandez | | Reviews, Tutorials
Kuphela ziiyure ezimbalwa kudlulile oko kubonisiwe ii-terminals ezintsha zenkampani yaseTshayina iHuawei, apho sinokubona khona I-Huawei Mate 20 Pro kunye nezinye iiterminal ezimbini ezineenkcukacha ezinamandla. Emva kokubuya kwethu eLondon, kuya kufuneka sijonge ngasemva kwaye sifumanise ukuba yintoni eyenza le fowuni yeHuawei ibe yekhethekileyo.
Ngoko ke, Kwi-Androidsis sikulethela umbono wethu wokuqala malunga neHuawei Mate 20 Pro, hlala nathi kwaye ufumanise. Ngale ndlela siza kuthatha ukhenketho lweempawu eziphambili zesiphelo kunye neemvakalelo athe wasinika zona.
2 Iimpawu zokuqala zeHuawei Mate 20 Pro
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, le Huawei Mate 20 Pro inetekhnoloji kunye nezixhobo zentsimbi, nangona kunjalo Kuya kufuneka sigqamise ukusetyenziswa kweprosesa yayo ye-980 nanometer Kirin 7 ethi inkampani yaseTshayina inyuse njengekamva labaprosesa malunga nokuzimela, ukusebenza ngokukuko nangaphezu kwawo onke amandla enkosi ngomsebenzi weMali-G76 GPU. Sishiya uluhlu kunye nezona zinto zibalulekileyo zobuchwephesha kule Huawei Mate 20 Pro ukuze ukwazi ukuyijonga ngokukhawuleza kwaye ke siza kukunika umbono wethu wokuqala emva kokuvavanya i-terminal.
Iimpawu zokuqala zeHuawei Mate 20 Pro
Akunakuphepheka ukujika amehlo xa i-Huawei Mate 20 Pro izakungena kwindawo yethu ebonakalayo, kuyacaca ukuba iglasi egobile kumacala omabini ichukunyiswe ngokucacileyo zizixhobo ze-Samsung yaseKorea, nangona kunjalo, iyahambelana ngokugqibeleleyo indibano yesixhobo. Kwakhona okuphawuleka kweli candelo yinto yokuba ikhamera ime kancinci ngokuthelekiswa neeterminal ezinje nge-iPhone XS okanye i-Samsung Galaxy Note 9. Nangona kunjalo, Into abangakwazanga ukuyilwa ngokuchasene nayo ngokuchanekileyo inotshi ngaphambili, ngokucacileyo ikhuthazwa kukungenelela kwenkqubo yokuvula yobuso ye-3D Ukubonisa isantya kunye nokusebenza ngokufanelekileyo okuchanekileyo.
Isakhelo esincinci sikroba emazantsi esingabonakali sikhathaza, kodwa ukuba abafana baseHuawei banokuthi basindiswe ngokuqinisekileyo. Okwangoku, iglasi kunye ne-bezels zitsala umdla wazo ngaphezulu kweenkcukacha ezichanekileyo. Inyani yile yokuba uHuawei wenze umsebenzi olunge kakhulu kwindibano kunye noyilo lwale Mate 20 Pro, Nangona kunjalo, akufuneki silibale ukuba sijongane nesiphelo esingaphezulu komqobo we-1.000 kwaye siphakathi kwezona zibiza kakhulu kwimarike yoshicilelo esemgangathweni.
Ukuthethelela ukuhlawulwa kwemali, bacebise ukubandakanya uthotho lweetekhnoloji esingenako ukungahoyi kwaye etsala umdla kusetyenziso lokuqala. Yongezwe kwiskena sobuso esikhankanywe ngasentla yinkqubo yokuvula iminwe efakwe kwiscreen. Ngelixa kuyinyani ukuba le nkqubo ayisiyonto intsha, ewe safumana ukusebenza ngokukhawuleza nangokufanelekileyo okokuqala ngqa, ukuguqula indibaniselwano yazo zombini zibe zezona zinamava okuvula afumaneka kwimarike, into engazange i-Apple, okanye uSamsun, okanye iXiaomi ikwazi ukuyilinganisa.
Isandla kunye nesoftware, i-EMUI 9 iza isekwe kwi-Android 9, kodwa ke ngumaleko oqhelekileyo wokwenza ngokwezifiso owuthandayo okanye owuthandayo. Kule meko, ngaphandle kokulingana kwesoftware kunye nezixhobo zekhompyuter ezifumanekayo xa zinika ukusebenza okuphezulu ngemidlalo yevidiyo okanye imisebenzi enzima, sifumanisa ukuba eyona nto ilula kakhulu, kukutshintsha kwenkqubo yokusebenza okanye, umzekelo, inkqubo yekhompyuter. Izimbo zomzimba ezamkelweyo kwi-Android 9 zinika intsebenzo ekude lee nokuba inokunikezelwa njani sisiphelo sendlela. Kucacile ukuba oku kungenxa yomaleko weHuawei we-EMUI 9, onkqubela phambili yawo xa ithelekiswa nohlobo lwangaphambili ayinanto. Ngokwam, ndinamava amabi ngenkqubo yokuhambisa isenzo, Ndikukhuthaze ngamandla ukukhetha le seti kwi-EMUI.
Siza kuvavanya le Huawei Mate 20 Pro ngokugqibeleleyo kwezi ntsuku zimbalwa zilandelayo ukukunika uphononongo olufanelekileyo lwendlela yokusebenza kwesiphelo, ikhamera yayo kunye nobuchule bayo, okwangoku, siyathemba ukuba oku kuqala Baye bakunceda ukuba ufumane umbono wento yonke enakho ukuyenza le modeli.
Kucacile ukuba U-Huawei akafunanga kuyila nantoni na ngale modeli, kodwa inikezele ngeyona nto intle kwindlu nganye kwisixhobo esinye, Kungenxa yoko le nto sinescreen sokufunda ngomnwe ekungekho nkampani ikwazileyo ukutshatisa, kunye nenyongo yokubonelela ngokuskena ubuso ukuvula okungasebenzi kakuhle. Kwinqanaba lamandla, iHuawei Mate 20 Pro ayifihlwanga, kodwa kuyacaca ukuba icandelo lokufota yenye yezinto zalo eziphambili, liphucula ikhamera esele ingaqhelekanga yeHuawei P20 Pro.
Umsebenzi osalindileyo wolwakhiwo olwenziwe ngokwezifiso kwi-Android lusasebenza, I-EMUI 9 ayinikezeli ngeempawu ezintsha ezoneleyo zokutsala abasebenzisi zodwa, Ngapha koko, ibonakala iphantse yafana ne-ballast yesiphelo sendlela ngaphandle kwayo yonke into ibonakala ifezekile. I-EMUI kufuneka ithambekele kubuncinci kwaye ithathe amanqaku ngakumbi ngumahluko phakathi kwe-Android 8 kunye ne-Android 9, engacacanga phakathi kwe-EMUI 8 kunye ne-EMU 9.
Oku kuye kwaba yimibono yethu yokuqala malunga neHuawei Mate 20 ProSilinde wena kwi-Androidsis nakwindawo yethu yaseYouTube ukuze wabelane ngamava akho nathi, usibuze imibuzo yakho kwaye ukonwabele ezi terminals ezintle nathi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » I-Huawei Mate 20 Pro, ukubonakala kokuqala kwesi sigxina sikhulu